Igwefoto Button (SPY031) | Ngwọta OMG
Igwefoto Igodo Button (SPY031)
MINI SPY CAMERA: wepu onwe ya dị ka bọtịnụ, ọ nwere igwefụfụ a na-agbanye n'ime, igwefoto nledo a na-enye gị ohere idekọ ma ọdịyo na vidiyo na-enweghị onye ọ bụla na-amata ya. Ngwaọrụ a ga-agbanwe ndụ gị. Jiri ya iji gbasaa ncheta gị, iji nweta echiche na mkparịta ụka dị mma, nkwurịta okwu mkparịta ụka, nkwekọrịta azụmahịa azụmahịa na ihe ndekọ ọ bụla ọzọ ị ga-edebe.
HIDDEN VIDEO CAMERA IHE Ụlọ: Igwefoto pinhole zuru oke zoro ezo kacha mma zoro ezo obere igwefoto dị. a multi-ọrụ zoro ezo zoro ezo ezi eke agba HD video na doro anya na ọdịyo ma na-ewe ka foto foto ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa.
AHỤKWỤKWỌ NDỊ ỌZỌ: Ọrụ igwefoto, na-akwado 8gb micro SD kaadị na max, nke a na-arụ ọrụ nyochaa igwefoto na-arụ ọrụ zuru oke, nke ruru eru maka ọrụ ọ bụla pụrụ iche.
OTÚ ECHICHE NA-EJI EKPERE NA PC MA MA MAC: Weghara oge ọrụ, nwunye, enyi ma ọ bụ ụmụaka ọbụlagodi na ịnọghị ya! ihe nchekwa ngwaọrụ zoro ezo na-akwado usoro faịlụ maka PC & mac USB.
AKWỤKWỌ AKWỤKWỌ AHỤ AKWỤKWỌ: Batrị nwere ike ịkụnye ihe dị elu na-enye ohere maka ngwa ngwa ngwa ngwa na ogologo oge. kpoo vidio gi na ihe osise ya na ihe omimi nke oge na oge.
Igwefoto zoro ezo Obere Obere
→ Ị bụ onye nchịkọta akụkọ ozi ọma, onye odeakụkọ obodo, onye nyocha ma ọ bụ naanị onye na-eme fim na-eme ihe ọchị? Chọrọ ịdebe ihe ndekọ vidiyo na ntaneti nke nzukọ ndị ahụ dị mkpa maka nyochaa oge
→ Ogwe Ngwá Ọrụ Ngwá Ọrụ Ngwá Ọrụ 8 GB ga-enye gị ohere ịdekọ ọnụahịa, nzukọ azụmahịa, okwu ihu ọha na mkparịta ụka n'arụmụgụ n'enweghị egwu onye ọ bụla.
→ Nke a bụ otu n'ime ihe ndekọ ụda akụrụngwa dị egwu! Nke a na-eme ka ọ bụrụ ihe bara uru maka nchekwa na ijide ma n'èzí ma ọ bụ n'ime.
Ntinye vidiyo: 640 x 480
Ejiri ederede: 30 FPS
Were foto foto: ee
Mkpebi foto: 1280 x 1024
Usoro foto: JPEG
Image mmetụta: 1 / 4 CMOS sensọ
Ịgbaji voltage: DC-5V
Ụdị interface: mini 5-pin USB
batrị: Kọmitii lithium 180mAh dị n'ime ya
Oge ọrụ: Oge 1.5 maka vidiyo
Oge nkwụ ụgwọ: 2-3 awa
Memory: Ejiri na 4GB / 8GB / 16GB / 32GB
1 x Igwefoto Nyocha Igwe Nledo
1 x DC 5V chaja
Rịba ama: 8GB Kaadị nchekwa dị.
2.1 x 0.5 x 0.5 sentimita
Nzuzo 25889 18 Echiche Taa